မိန်းကလေး Group Chat တွေထဲက မိန်းကလေး အမျိုးအစား (၈)မျိုး - Lifestyle Myanmar
မိန်းကလေး Group Chat တွေထဲက မိန်းကလေး အမျိုးအစား (၈)မျိုး
သားသမီးတွေအတွက် မိခင်တွေ ပြုလုပ်ကြတဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု (၅)ခု
ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေအတွက် ရိုးရှင်းသော မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်းအချက်အလက် (၅) မျိုး
ကြက်သွန်စားပြီး ခံတွင်းနံ့နံတာကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ?
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဖြစ်နဲ့ပဲ အမြဲတမ်းသိမ်းထားသင့်သော အကြောင်းအရာ(၇) ချက်
သင့်ကို ခေါင်းဆောင်ဆိုးတစ်ယောက်လို့ မြင်စေမယ့် လုပ်ရပ် (၇)ခု
ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးလူငယ်လေးတွေအတွက် မိမိကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်နည်း (၇) ချက်
စုံတွဲတိုင်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ Relationship အခြေခံတန်ဖိုး (၉)ခု
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကိုယ်တန်ဖိုးမထားတဲ့အခါ သင်လုပ်သင့်တဲ့အရာ (၄) ခု
လက်တွေ့မှာ ရှက်စရာမလိုဘဲ ချီးမွမ်းခံထိုက်သော ဘဝရဲ့ အဆုံးအဖြတ်အပြုအမူများ
ဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်မှု (Critical Thinking)က ဘာ့ကြောင့် အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း (၅)ချက်
Gym သွားစရာမလိုဘဲ သန်မာတဲ့ ခြေထောက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ရစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၈) မျိုး
မြင်း, သိုး, မျောက်,ကြက်, ခွေး, ဝက်နှစ်ဖွားတွေအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ တရုတ်ရာသီခွင်အဟော
သင့်မှာ ရင်းနှီးတဲ့ မိန်းကလေးအုပ်စုရှိရင် ဒီဆောင်းပါးက သင်နဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေး group chat တိုင်းမှာ မန်ဘာတိုင်းအတွက် role တစ်ခုစီရှိကြပါတယ်။ သင်နဲ့အနီးစပ်ဆုံး ဆင်တူတာတစ်ခုကို သင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကဲ.. ကိုယ်က ဘယ်အမျိုးအစားနဲ့ တူနေသလဲဆိုတာ ရှာကြည့်လိုက်နော်..
မိန်းကလေးအုပ်စုတိုင်းမှာ အမေလို မိန်းကလေးလို အမြဲရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က တစ်စုံတစ်ယောက် မွေးနေ့ရှိတယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလေ့ရှိပြီး ခဿလေးအတွင်းမှာ လူတိုင်းကို ပါဝင်ပတ်သတ်လာအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သူတို့က အချိန်တိုင်း နည်းနည်း မြည်တွန်တောက်တီးတတ်သူ ဖြစ်ပေမယ့် နွေးထွေးတဲ့ နှလုံးသားရှိသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
(များသောအားဖြင့် Single ဖြစ်နေတတ်တဲ့) အဖွဲ့ရဲ့ အချစ်ဂုရုကြီးဟာ အတွေ့အကြုံများစွာ မရှိသော်လည်း အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေပေးဖို့ အမြဲတမ်းရှိနေတတ်ပါတယ်။
၃။ အတင်းအဖျင်းဘုရင်မ/ အန်တီ
latest အတင်းအဖျင်းတွေ၊ မြို့မှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးတွေ ၊ အခြားအရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်တွေကို အမြဲတမ်းသိနေတတ်တဲ့ အတင်းအဖျင်းဘုရင်မက အဖွဲ့ကို ပထမဆုံး update သတင်းတွေပေးပါလိမ့်မယ်။
သူတို့က ချက်တင်မှာရှိတဲ့ အရာအားလုံးကို ဖတ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် တစ်စုံတစ်ယောက်က သူတို့ကို ထွေထွေထူးထူး မမေးဘူးဆိုရင် ဘယ်တော့မှာ reply မပြန်တတ်ကြပါဘူး။
သူတို့က ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အီမိုဂျီနဲ့သာ reply ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ အီမိုဂျီတစ်ခုက စကားလုံးတစ်လောက်လောက် ခြယ်သနိုင်ပါတယ်။
၆။ စိတ်ပေါက်မှ လိပ်လောက်ပြေးသူ
ထိုကဲ့သို့သောသူတွေဟာ များသောအားဖြင့် Group က active ဖြစ်နေချိန်မှာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းကို လက်လွတ်ရတဲ့ replier နှေးကွေးသူလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အိုးမိုင်ဂေါ့? ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ? လို့ဝင်ပြောတတ်ကြပါတယ်။
၇။ innocent လေးတွေ
သူတို့က အကြံပြုချက်ပြက်လုံးတွေ၊ အရမ်းအပြစ်မဲ့တဲ့ စာကြောင်းတွေမှာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာသ ထည့်သွင်းမှုတွေကို ချေမှုန်းသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိန်းကလေးတွေက များသောအားဖြင့် သူတို့မသိတဲ့ လူတွေနဲ့ဆိုရင် တကယ့်ဘဝမှာ အရမ်းရှက်တတ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ Reaction Machine
Reaction Machine ဆိုတာက ဂရုချက်ထဲက မက်ဆေ့ချ်မျိုးစုံနှင့် စတေကာ၊ gifs အနည်းငယ်ကို မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တုံ့ပြန်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က တစ်ခါတလေ spam ဖြစ်လွန်းနိုင်သော်လည်း အုပ်စုထဲမှာ ဒီလိုလူ ကျိန်းသေပါပါတယ်။
ရင်သွေးလေးလွယ်ထားရပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတာနဲ့အမျှ မိခင်မေတ္တာလို့ သိကြတဲ့ လှပတဲ့ ခံစားချက်ဟာ မိခင်တွေရဲ့ဝမ်းထဲရှိ ကလေးငယ်နှင့်အတူ ကြီးထွားလာပါတယ်။ အဲ့ဒီချိန်မှာ မိခင်တွေရဲ့မျက်နှာဟာ ဝင်းပနေပြီး ဘဝရဲ့အဓိပ္ပါသစ်တစ်ခုကို ခံယူကြပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုကင်းတဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးက ကိုယ့်ရဲ့ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်တာကို မေမေတို့...
သင့်ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်သမီးလေးက မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား? ပထမဆုံးအကြိမ် မိတ်ကပ်မလိမ်းမဖြစ်လိမ်းရမယ့် အရေးကြီးပွဲကြီးကြီးတစ်ခုခုကို တက်ရတော့မှာလား? ဒီနေ့ခေတ်ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ခြင်းပုံစံနှင့် သင်တို့ခေတ်မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ခြင်းပုံစံကွာခြားနေမှာကို စိုးရိမ်နေတာလား? သင့်ဆယ်ကျော်သက်လေးအတွက် မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ မိတ်ကပ်အထူကြီးလိမ်းထားသလိုဖြစ်မနေစေဘဲ နုပျိုလန်းဆန်းနေစေဖို့ ကူညီပေးချင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်းက မျက်နှာမှာရှိတဲ့...
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ကြက်သွန်နီကို ဟင်းအမယ်မျိုးစုံမှာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပြီး ထူးခြားတဲ့အနံ့နဲ့ အရသာရှိတဲ့ အရသာကို ရရှိစေပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးက စားပြီးရင် ခံတွင်းအနံ့ဆိုးတာကို ဖြစ်စေပြီး အထူးသဖြင့် တခြားသူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ စိတ်မသက်မသာ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။...
အလွန်အကျွံဝေမျှခြင်းနှင့် လျှို့ဝှက်ခြင်းအကြားမှာ ကြီးမားသောခြားနားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ချို့အရာတွေက ဘဝမှာ လျှို့ဝှက်တာပိုကောင်းပါတယ်။ လူတိုင်းက အရာရာကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်စွမ်းမရှိပေမယ့် လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဖုံးကွယ်တတ်သူတွေကို လူတွေက ပိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သူအဖြစ် ရှုမြင်ကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ပြဿာနာတွေ (သို့) တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေကို...